ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမြန်မာများနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံပွဲ ရုပ်သံ | MoeMaKa Burmese News & Media
၀ါဆိုလပြည့်နေ့၊ မကွေးမြသလွန်ဘုရား စည်ကား
ကနေဒါ - ဗန်ကူးဗားမှ မြန်မာမိသားစုတို့ ရဲ့ (၁၇)ကြိမ်မြောက် နှစ်ကူးအတာသင်္ကြန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန်လွှတ်တော် Rotunda ခန်းမဆောင်မှာ ဂုဏ်ပြုမှုလက်ခံ (ရုပ်သံ)
Zarganar in NYC on YouTube
Zarganar in SF now on YouTube
Suu @ Osolo - Peace Forum
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမြန်မာများနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံပွဲ ရုပ်သံ
မိုးမခရုပ်သံ၊ (နွေးနွေး၊ ကိုကျော်နိုင်) အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၂
စက်တင်ဘာ ၂၉၊ USF တက္ကသိုလ်ပရ၀ုဏ်မှာ နံနက် ၉ နာရီ ၁၅ မှ ၁၀ နာရီ ၄၅ အထိ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမြန်မာတိုင်းရင်းမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဧည့်ပရိသတ် ၃၅၀၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲခင်းအတွင်း ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ရုပ်သံကို ပြန်လည် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဆန်ဖရန် မြို့တော်ဝန်က ဒေါ်စုအား နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ USF ကျောင်းကိုယ်စား ကယ်လီဖိုးနီးယားလွှတ်တော်အမတ် နန်စီပလိုစီက ဂုဏ်ပြုခြင်း၊ ဒေါ်စုက နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း နှင့် မြန်မာပြည်သူတို့၏ မေးခွန်းများကို ဖြေကြားခြင်းတို့ ကို အစီအစဉ်တွေထဲမှာ မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
3 Responses to ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမြန်မာများနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံပွဲ ရုပ်သံ
tunwai on October 1, 2012 at 8:54 am
let me share . moemekha.My post in my blog ,ko yit, thank you .
khemissara on October 1, 2012 at 10:42 am
အံ့သြော်စရာပါလား လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဂုဏ်နဲ့ထိုက်တန်ပါပေ. ဒီလိုအရည်းအချင်းရှိပြီး စိတ်ဓာတ်မြင့်မား အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ထက်ပိုလွန်တဲ့သူတော်စင်ပါပဲ
Mgmg kyaw on October 2, 2012 at 7:38 am